Allsafe စျေး - အွန်လိုင်း ASAFE2 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Allsafe (ASAFE2)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Allsafe (ASAFE2) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Allsafe ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $179 877.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Allsafe တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Allsafe များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AllsafeASAFE2 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0216AllsafeASAFE2 သို့ ယူရိုEUR€0.0185AllsafeASAFE2 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0166AllsafeASAFE2 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0199AllsafeASAFE2 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.195AllsafeASAFE2 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.137AllsafeASAFE2 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.483AllsafeASAFE2 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0814AllsafeASAFE2 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0288AllsafeASAFE2 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0304AllsafeASAFE2 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.486AllsafeASAFE2 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.168AllsafeASAFE2 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.116AllsafeASAFE2 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.62AllsafeASAFE2 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.66AllsafeASAFE2 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0297AllsafeASAFE2 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.033AllsafeASAFE2 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.673AllsafeASAFE2 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.15AllsafeASAFE2 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.31AllsafeASAFE2 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩25.66AllsafeASAFE2 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.4AllsafeASAFE2 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.59AllsafeASAFE2 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.6
AllsafeASAFE2 သို့ BitcoinBTC0.000002 AllsafeASAFE2 သို့ EthereumETH0.00006 AllsafeASAFE2 သို့ LitecoinLTC0.000406 AllsafeASAFE2 သို့ DigitalCashDASH0.000249 AllsafeASAFE2 သို့ MoneroXMR0.000252 AllsafeASAFE2 သို့ NxtNXT1.77 AllsafeASAFE2 သို့ Ethereum ClassicETC0.00325 AllsafeASAFE2 သို့ DogecoinDOGE6.38 AllsafeASAFE2 သို့ ZCashZEC0.000269 AllsafeASAFE2 သို့ BitsharesBTS0.853 AllsafeASAFE2 သို့ DigiByteDGB0.73 AllsafeASAFE2 သို့ RippleXRP0.078 AllsafeASAFE2 သို့ BitcoinDarkBTCD0.000761 AllsafeASAFE2 သို့ PeerCoinPPC0.0729 AllsafeASAFE2 သို့ CraigsCoinCRAIG10.05 AllsafeASAFE2 သို့ BitstakeXBS0.941 AllsafeASAFE2 သို့ PayCoinXPY0.385 AllsafeASAFE2 သို့ ProsperCoinPRC2.77 AllsafeASAFE2 သို့ YbCoinYBC0.00001 AllsafeASAFE2 သို့ DarkKushDANK7.08 AllsafeASAFE2 သို့ GiveCoinGIVE47.76 AllsafeASAFE2 သို့ KoboCoinKOBO5.03 AllsafeASAFE2 သို့ DarkTokenDT0.0199 AllsafeASAFE2 သို့ CETUS CoinCETI63.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 06:45:03 +0000.